नेपाल आज | यस्तो पो प्रेम ! पोलियो पीडितसंग प्रेमविवाह गरेकी कार्यवहाक राजदुत इन्दिराको कथा
यस्तो पो प्रेम ! पोलियो पीडितसंग प्रेमविवाह गरेकी कार्यवहाक राजदुत इन्दिराको कथा
कीर्तिपूरमा अंग्रेजी पढ्थे दुबैजना । एउटै कक्षाका मनोज र इन्दिराको दोस्ती गजबगरी बाक्लियो । पढाइमा मेहनत गर्ने दुबै संर्घषशील थिए घरमा विहेको कुरा चल्न थालेपछि जीबनसाथीको कल्पना हुन्थ्यो । । इन्दिरा लक्काजवान केटासंग विवाहको कल्पना गर्थिन जो हरहिसावले पूर्ण होस । पढाइको अन्तिम दिन मनोजले मन खोेले, ‘म तपाईलाई चाहन्छु ।’ दोस्ती र प्रेम अलग विषय हुन् । उनले मनोजलाई जीबनसाथीका रुपमा सोचेकी थिइनन् । तर, मनोजको इमान्दारिता, समझदारीपूर्ण व्यवहार र सफा दिलले उनलाई नाइनास्ती गर्नबाट रोक्यो । बाहिरी आवरणमा खोट भएपनि उनी सुन्दर थिए । भेटै नभइकन मनोजको प्रस्ताव आएको हुन्थ्यो भने उनी सिधैं नाइ भन्दिन्थिन् । २ बर्षको संगतका कारण सुन्दर इन्दिराको मन पूरै परिवर्तन गरिदियो, व्यक्तिको शारीरिक बनोटभन्दा हृदयको बनोट मुख्य हो भन्ने निष्कर्षमा उनी पुगिन् । सुटुक्क विहे गरिन् ।
(साप्ताहिकमा प्रकाशित इन्दिरा अर्यालको अन्तवार्तामा आधारित । फोटो इन्दिरा र मनोजको फेसबुकबाट)
Indira Aryal love Manoj Gohiwar Marridge Russian Rajdoot